Umhla My Pet » 12 Tips Ukuze Hlala yimincili Xa Ukuthandana umxokozelo
ukubuyekezwa: Oct. 14 2020 | 4 min ukufunda
ukuthandana ngekhompyutha amaxesha uziva kunokutyhafisa kakhulu. Oku kunokubangela ukuba bangaziva satshiswa, sicaphuke akrakra. Ngoko Unokuwuphepha njani lo kwaye endaweni ukuthandana online amava kwimpepho ngobumnandi kunokuba? Nanga amanye amacebiso kuwe.
– Yamkela ukuba uza kudibana kakhulu abantu online nje akayi kuba oko intooyikhangelayo. Kulungile! Yinto yinxalenye makanenzele. Musani ukhutshwe ukuba amanani afikelele babengamakhulu (Andikuthethi oku lukoyikise kwaye oko ukufikelela oku eliphezulu xa ubala yonke e-mail). Ukuthandana online Kukho ezininzi imiyalezo kwaye emva naphambili. Yamkela kwaye iya ndinikhathaze ngakufuna nto kuni.
– Yiba iinkqubo zokujongana ie-mail kunye nabafowunelwa. Oku kukunceda ukunqanda utshe waphela uhlale zizizathu. Ndandidla ukuba i-imeyile umlinganiselo ukuba ndiza kusebenzisa ngenxa ngokuqhagamshelana nabantu endikuthandayo ukuziqhelanisa nje kancinci ngokuxhomekeke ngamnye mna ngokuqhagamshelana. Ndiyazi ukuba oku inokubonwa awungomntu, enyanisweni le yindlela nje kakuhle ukulawula inkqubo kwaye uhlale amandla aphezulu. Emva kokuba wachitha iiyure ukuchwetheza idilesi ye-imeyile ogqibeleleyo kuphela ukuba akukho mpendulo (kwakhona), uya kuqonda ukuba kutheni ndi ya cebisa. Unako kwakhona abalawuli abohlukeneyo apho wabeka abantu kuxhomekeke unomdla okanye nokuba.
– Gcina lokuqala e-mail mfutshane. Mna wayengathethi ukuba anithanga bento ukwazi abantu, kuphela ukuba kukugcina lokuqala e-mail intle elifutshane ngexesha sokuhluza kubo. Ukuba emva eziliqela e-mail elifutshane zombini usenomdla nasekwaziseni ke ungaya ngakumbi intwana encinane kunye nabo. Oku kusekelezwe ukuthintela aqhumisele phandle nokusingatha ukuba ufumana eninzi e-imeyili kunye nenzala.
– Yisa 'umntu' okanye ngomnxeba ngokukhawuleza. Ngokucacileyo ukugcina ukhuseleko engqondweni, yaye ndikhuthaza abantu bam ukuya kumhla ubomi ngokukhawuleza. Oku kungenxa yokuba abantu kwahluka kakhulu ebomini lokwenene kwi indlela onlayini, kwaye niya kuyazi ukuba ziya kubakho ubulungeleyo de odibana nabo ubomi benene. Yoku musa ukuchitha iiyure imiyalezo emva naphambili online, kungenjalo uya Ungachitha ixesha elininzi abantu ukuze singabi ezifanelekileyo kuwe.
– Musa ukuxhala ukuba anithanga ukufumana iimpendulo kwi-e-mail wena uthumele. Xa oku kusenzeka kuwe Ndiyazi kusuke kuvakale owoyikeka kwakhona musa singakhubeki. Maxa wambi siye ngokusebenzisa mabophe owomileyo apho sifumana NTO. Akukho iimpendulo nayiphi na e-mail esikuthumelela, awunabafowunelwa njalo. Musa ukuphaphazela xa oku kusenzeka kuwe, kodwa ke kubalulekile omnye Jonga Injongo oko ukubhalileyo kwiprofayile yakho kunye imifanekiso siyiposele. Ithoni yeprofayili bakho niya kuba nobubele, ukukhanya okuchwayitha. Ukuba nangoku ungenandawo luck xa ujongile iprofayile yakho, cela umhlobo omthembileyo ukuba khangela phezu kwaye akunike eminye ingxelo. Nalo kubo khangela phezu ezinye imiyalezo wena endizigxothayo ukuqinisekisa ukuba ukufunda Kulungile.
– Ngokufanayo, ukuba ngaba umfazi kwaye ilindele ukufumana imiyalezo nto iza, kwakhona ungaxhalabi. Funda kwaye ulandele inyathelo ngasentla. Kananjalo qaphela ukuba le ndawo enye ndiyacebisa nabasetyhini kumandla oliduna, nje le linyathelo lokuqala. Ndiya ukuthini oku kuhamba phambili kwaye wenze lokuqala ngokuqhagamshelana zomyalezo abantu ungathanda ukuba. kwiziza ukuthandana Intanethi kunokuba kakhulu 'ingxolo' kwaye ndilahleka ingxubevange ukuba anithanga ukubazisa bona ebusweni bakho. Sebenzisa amandla kwakho oyindoda ukuqhagamshelana abantu bafumane kwiinkqubo endaweni, uze ulahle kanye uye kungena amandla esobukhomokazi xa sele eqalisile unxibelelwano.
– Musa ukuba ngokobuqu xa bathe shwaka. Siye bonke oko kwenzeka. Udibana nomntu online, wena bencokola kunye nabo, oko konke kuhamba kakuhle, nokwakha amandla, mhlawumbi ukuba kwanaxa ukuya nicela umhla, waza ngesiquphe 'POOF' Ziya kuphela ngelifu alidalileyo elirhuqayo, singaze siphinde sibonwe bani. Ngaba uthetha into iyoyikeka? Ngaba bafe? Kakuhle mhlawumbi. Kukhona ke ukuthetha nabanye abantu online, kunye nomnye umntu ndangena apha kuqala, okanye mhlawumbi ex yabo nangoku ke ngokufihlakeleyo ilithanda wabonisa buyela kwaye uye waba kusinde lucky. Ingongoma kukuba uya mhlawumbi ukwazi. Yaye oku kwenzeka lonke ixesha! Ukuba niyazi le nto inceda uthabathe ayibi kuyo. Ndisoloko icebiso ukuba abafazi bam abaneengxaki kakhulu Ukuthabatheka ude okunene wadibana naye ubomi benene, kwaye eneneni ade uyasibonisa ukuba unomdla kakhulu kuwe. Kude kube lelo xesha yena khetho nje omnye kuni zaziphuma kwabaninzi. Musa ukuzibek 'shwaka' ngokobuqu.
– Phatha yonke kunye uwathandabuze. ukuthandana Intanethi ukuba yintoni na. Ke ukuba anithanga nibe nako nokuyamkela nguwe kuya kuba ixesha lula ngayo. Uza kufunda ezinye sonke, uya kudibana nabanye abantu ocinga ukuba elixeshalibi, ukuba mhlawumbi uya kudibana abanye abantu ungathanda kwaye mhlawumbi uya kudibana umntu unokuba nolwalamano awe eluthandweni kunye. Kodwa ke nantoni na ke, iya kuba ngamava. Uya kukhula njengoko umntu ngenxa kwaye ufumana ukuqhelisela ukuthetha nabantu besini esahlukileyo. Ngoko ke musa akanikezeli, kuba nje qiniseka ukuba uyithabathe uwathandabuze, wohleka kunye nabahlobo bakho ngalo uzonwabise nayo endleleni.
Ebusika Umhla Ideas